Iyo Chicago Cannabis Gweta Inogona Sei Kubatsira Iwe Kutanga Bhizinesi?
Sei Gweta reChicago Cannabis Rinogona Kukubatsira Iwe Kutanga Bhizinesi ReCannabis
Kana uri kutsvaga Chicago cannabis Gweta, wasvika panzvimbo chaiyo. Mune ino chinyorwa, tinoratidza zvinhu zvese zvakavharwa neChicago cannabis mumiriri mune cannabis bhizinesi. Izvo zvakakosha kuti uzive maitiro ekutevera nemirairo uye maitiro ekuchengetedza akachengetedzwa semuridzi webhizinesi.
Chakanaka Chicago cannabis Gweta inogona kukubatsira kudzikisa njodzi uye kuwedzera nguva yekushanda kwebhizinesi rakabudirira.
Kubvumirana neIllinois Cannabis Laws
A Chicago cannabis Gweta munhu ari pamutemo munhu anogona kukubatsira iwe nekutevedzera Illinois cannabis mitemo. Kutengwa kwevaraidzo mbanje kuchave pamutemo muIllinois kubva muna Ndira 1, 2020, uye ino ndiyo nguva yekushanduka kukuru muindasitiri ye cannabis. Vashandisi vane chaiyo Medical Cannabis Murwere ID kadhi vanozokwanisa kutenga mbanje yekurapa uye vamwe vese vashandisi vanobvumidzwa kutenga mbanje nekuda kwekunakidzwa.
Mabhizinesi akanyoreswa sevabvumiranwe achave nesarudzo yekutarisa ruzivo rwevatengi vachishandisa mhando dzeCova's ID scanner. Neaya ma scanners, ruzivo rwevatengi ruchaita zviri nani zvikuru nekutenda nekukurumidza-mu-kutama maitiro uye isina simu yekutengesa. Muganho wekutenga ndeye 2.5 mahekita emaruva e cannabis. Izvo zvichave zvichikwanisika kutenga iyi huwandu hwemakumi maviri nemairi emadziro mazuva ese gumi nemana.
Mumwe mutemo mune cannabis mirau muIllinois huwandu hweTHC mune zve cannabis-infosed zvigadzirwa. Hapana anodarika mazana mashanu emamirigiti eTSC achabvumidzwa mune izvi zvigadzirwa. Automated kutenga mucherechedzo mareti anobvumira vatengesi kuti vadzivise kuwedzeredza kune varwere uye vatengi vatosvika padanho rekutenga. Mune iyi kesi, vakuru vehurumende yevashandi veI Illinois vanoda kudzvinyirira uye kupfuurisa-kutambisa-kwema mbanje kwekurapa mbanje.
Vanotengesa veCannabis muIllinois vanoda kuramba vachiita zvinoenderana nemitemo, uye ivo vachatevera zvinotevera zviito:
Kutanga uye kupedzisa hesita
Kuwanikwa kwe cannabis
Kuraswa kwe cannabis
Kubika kunoshandisirwa zvizere sezvo maCova scanners akabatanidzwa zvizere nehurimendi reseji yekusimbisa yeIllinois. Inventory control uye poindi yekutengesa masystem anoenderana newebhu uye inowanikwa nehurumende chero nguva. Iyo Cova system inosangana nezvinodiwa kana zvasvika pakutsvaga kutonga iyo iri musimboti wekuchengeta zvigadzirwa kunze kwemaoko evadiki. Panguva imwecheteyo, zvigadzirwa zvinodzivirirwa kubva kumusika mutema uye zvisiri pamutemo zviitiko.
Zvibvumirano uye Mashandiro neCannabis Bhizinesi
A Chicago cannabis Gweta rinogona kukubatsira kupinza zvibvumirano zvinoenderana nebasa rako rebhizinesi. Mune izvo zvibvumirano chaizvo, iwe unogona kutsanangura iyo mitemo uye zvinosungirwa zvebato rega rega. Nekutarisa kukuru kune yega yega ruzivo, muchengeti weChicago cannabis anogona kutsanangura zvinotevera zvibvumirano:
Zvinyorwa zveImberi kana Sangano
Chibvumirano cheMukati Yekutonga
Zvese zvibvumirano izvi zvinoitwa kuti zvipe kuchengetedzwa kwepamutemo kwebhizinesi rako kodzero uye zvinhu. Gwaro rega rega rinotsanangura mabatiro aunogona kuita nebhizinesi rako bhizinesi panguva chaiyo yebhizinesi mamiriro. Kuteerana nemitemo uye nemitemo yeIllinois chinhu chakakosha kwazvo munzira yekubvumirana kwese. Mumiriri weChicago cannabis achaita kuti zvibvumirano zvive nyore kushandisa uye nzwisiso kuitira kuti iwe ugone kuunzwa pamwe nezvakakosha zvinyorwa zvezvibvumirano.
Kunze kwe akataura zvibvumirano, ungangodawo zvinyorwa zvinotsanangura bhizinesi rako nenzira yakadzama. Mune iyi nyaya, iwe ungangofanirwa kuve nechibvumirano chebasa chinotarisa izvo zvisingakwanisi uye nemirairo yevashandi. Rimwe gwaro rakakodzera chibvumirano chekutenga masheya chinotsanangura kutengesa masheya kana mamwe mafomu ehumambo mukambani. Gwaro rechitatu rinouya nenzira yechirongwa chebhizinesi. Iri gwaro rinotsanangura chirongwa chebhizinesi re cannabis ine maitiro ekushandisa mumhando dzakawanda dzakasiyana. Kuchenjera ese aya magwaro, ungangoda kutaurirana pamwe neChicago cannabis Gweta.
Kufambidzana neNyika yeI Illinois neCannabis Licensing Matters
Kubatana neHurumende yeI Illinois kwakakosha mune zvakasiyana mamiriro. Vese varidzi vebhizinesi vanoda kutora rezinesi vanofanira kutevedzera zviri pamutemo mirairo. Mhando huru dzeanonyorera marezinesi dzinoda chaizvo chaizvo hunyanzvi. Iwe ungangoda kupa ruzivo rwako pachako, mhosva yemashure yekutarisa, chirongwa chebhizinesi kune iro chairo bhizinesi re cannabis, uye mubhadharo wekushandisa zvachose weiyo rezenisi.
Mumamiriro ezvinhu kana iwe uchida kuwana reti yekurapa mbanje dispensary rezenisi, ungangoda kubhadhara mubhadharo wekunyoresa emadhora makumi matatu emadhora iyo iri mvumo yepamutemo mudunhu reIllinois. Kana iwe ukawana rezenisi redhisheni, iwe unozokwanisa kutengesa zvigadzirwa zvechi cannabis kune vanhu vakuru vane makore makumi maviri nemasere kana kupfuura. Izvi zvichakwanisika kubva muna Ndira 30,000, 21.
Zvikumbiro zvichaiswa maererano nespecial scging system, uye vanyoreri vachaziva kana vagamuchirwa muna Chivabvu 1, 2020. Kusvikira makumi manomwe nemashanu marezenisi achapihwa uye vanonyorera vanowana rezenisi remutemo vane mazuva 75 ekutsvaga nzvimbo yakakodzera kutengesa cannabis. Iyo nzvimbo inofanirwa kubvumidzwa nevakuru vebazi.
Iyo nyanzvi yekumisangano iyo inotarisira cannabis marezenisi mu Illinois ndiyo Illinois Dhipatimendi reMari uye Professional Regulation (IDFPR).
Kubatsira neZvivakwa uye Kugadzirisa Nyaya
MuI Illinois, zvichave zviri pamutemo kukura uye kutengesa cannabis mune mamwe matunhu ehurumende kubva 2020. Kuti uite zvinodiwa zvepamutemo, iwe unofanirwa kubvunza kune weChicago cannabis Gweta uyo angakurudzira kuti ndedzipi nzvimbo dzinowanikwa dzebhizimusi re cannabis uye kuti ungaita sei mukati iyo mirau.
Kana iwe uri kutanga bhizinesi re cannabis uye uchida kutenga zvivakwa, zvakanaka kuti ubvunze gweta rako nezve sarudzo dzaungave uinadzo. Kutanga bhizinesi re cannabis mu Illinois zviri nyore nerubatsiro rwemugweta weCanada cannabis. Iwe unozogona kuwona izvo zvinokwanisika kutanga mudunhu uye kuti rezenisi rekurudyi rinogona sei kuita mutsauko. Nechirongwa chakanaka uye nyanzvi yeChicago Gweta, iwe uchave nemukana wekuve neanoshanda zvakanyanya bhizinesi re cannabis ane maonero akanaka ekukura mudunhu reIllinois.